फ्रान्स र क्रोएसिया कस्ले चुम्ला उपाधि ?
काठमाडौं । २०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आगामी आइतबार फ्रान्स र क्रोएसिया भिड्ने भएका छन् । यो खेलमा जसले विजय हात पार्नेछ उस्ले ४ वर्षसम्म विश्व विजेताको रुपमा विश्व फुटबलमा राज गर्नेछ । अनि सुनको ट्रफी चुम्ने हक पाउने छ । तर यी दुई टोलीमध्ये कस्ले चुम्ला त सुनको ट्रफि ?
फिफा बरियतामा २० औं स्थानमा रहेको क्रोएसिया फाइनलमा पुग्ने अहिलेसम्मकै कम वरीयताको टिम पनि बनेको छ । यसपटक लुका मोडरिचको कप्तानीमा रहेको क्रोएसिया पहिलो पटक उपाधी जित्न मरिमेटेर लागेको छ । क्रोएसिया अग्रपंक्तिमा फरवार्ड मारियो मान्जुकिचे राम्रो लयमा छन् ।